China Baron OEM & ODM Service (ngwaahia akara ọrụ) Nlụpụta na Factory | Baron
Baby metụ akwa
Baby Ọzụzụ Pants
Adult metụ Pant
Lady Napkin Ogologo ọkpa
Ihe nhicha ahụ
Degradable metụ akwa akpa
Pet metụ akwa
Baron OEM & ODM Service (Akara aha njirimara)
Baron bụ China si n'elu nwa metụ akwa emeputa & soplaya, anyị na-achọ ndị nkesa ụwa, na ọkachamara metụ akwa nzuzo labeelu ọrụ na-nyere. Anyị nwere ikike ịmepụta ihe na igwe kacha mma kacha mma.
· Baby metụ akwa
· Baby Training Ogologo ọkpa & sere-elu metụ akwa ọkpa
· Eco metụ akwa
· Eco sere-elu metụ akwa ọkpa
· Okenye metụ akwa
· Okenye metụ akwa okenye
· Lady Diaper Ogologo ọkpa
· Nwanyị Sanitary Sankin
· Baby ekpochapụ
· Eco Ehichapụkwa
A hụrụ Baron (China) Co. Ltd na 2005. companylọ ọrụ ahụ na-enye ọrụ zuru oke gụnyere nyocha ngwaahịa na mmepe, imewe, mmepụta zuru oke, ahịa na ọrụ ndị ahịa, ma nwee aha ọma maka ịdị mma na ogo ngwaahịa, ihe ọhụrụ na ọrụ ndị ahịa ebe ha nwere ike ịnye ndị ahịa anyị uru kachasị mma.
Baron wuru ụlọ ọrụ ọkọlọtọ na ogbako nke na-ezute ụkpụrụ mba ụwa na usoro mmepụta akwa ụmụ ọhụrụ dị elu nke 8. The ụlọ ọrụ na-eji Hengchang na Hanwei mmepụta ngwá, nke bụ n'elu mmepụta ngwá ụdị na China. Ngwá ọrụ ahụ dị 100T ma hụ na nkwụsi ike nke ngwaahịa Besuper. Ihe a na-eme kwa afọ bụ 800 nde PC, nke hà nha 3300 40HQ.
Baron ejiriwo ndị ọrụ nyocha na ndị ọkachamara na-ahụ maka mmepe, ndị nwere afọ iri abụọ rụọ ọrụ na ụlọ ọrụ metụ akwa. Companylọ ọrụ a nwere ihe ikikere mba iri abụọ na atọ na akwa akwa ma na-etinyekarị aka na ihe ọhụrụ iji mepụta akwa akwa ụmụaka.
Asambodo mba uwa
Ka ọ dị ugbu a, Baron nwetara asambodo nke BRC, FDA, CE, BV, na SMETA maka ụlọ ọrụ na asambodo SGS, ISO na FSC maka ngwaahịa a.
Baron na-ekpuchi mpaghara nke mita 33,050, na mpaghara owuwu nke 29,328.57 square mita. Ihe karịrị ụlọ nkwakọba ihe 90,000 m³ dị ọcha ma dị ọcha nwere usoro ịgba ọkụ na usoro ikuku ikuku iji hụ nchekwa ngwaahịa. Nhazi nke ụlọ nkwakọba ihe na-agbaso ụkpụrụ nyocha ụlọ ọrụ BRC na BV. Ebe nnyefe nke ihe karịrị 4000 square mita nwere ike ịnabata trailers 10 n'otu oge.
Ndị na-ebunye ihe niile dị n'ụwa
Baron na-elebara ezigbo ihe anya. Companylọ ọrụ ahụ nwere ọtụtụ ndị na-eweta ihe onwunwe, gụnyere Sumitomo, BASF, 3M, Hankel na ụlọ ọrụ mba ụwa ndị ọzọ nke Fortune 500.
Controllọ Ọrụ Njikwa Ogo
Baron emeela ule na akụrụngwa niile, wee rụchaa ngwaahịa n'oge yana mgbe emepụtara iji nyochaa ogo ngwaahịa ahụ site na mmalite ruo n'isi. Ka ọ dị ugbu a, ụlọ ọrụ ụlọ ọrụ na-ahụ maka njikwa njikwa na njikwa emezigharịrị site na ndị ọzọ na mba ụwa, gụnyere BRC, FDA, CE, ISO 90012008. Ndị ọzọ nwere ikike na-enyocha ngwa ọrụ nnwale niile otu ugboro n'afọ.
Alọ ọrụ ụwa
Taa, Baron emeela ọtụtụ ọganiihu na ngwaahịa teknụzụ, gụnyere ihe eji emepụta eriri bamboo a na-ere ere, akwa mpempe akwụkwọ T, akwa mpempe akwụkwọ mejupụtara, ngwaahịa ndị a na-egbo mkpa nke ndị ahịa ọ bụla na ụkpụrụ ahịa ha. A na-ahụta akwa nwa nke eco-biodegradable nwa mepụtara nke ụlọ ọrụ nwere ọnụ ọgụgụ kachasị elu biodegradability n'ụwa ma ọ dịkwa ewu ewu na mba ndị mepere emepe dịka USA, UK, POLAND, AUSTRAILA wdg.
Mkpakọrịta ogologo oge
Kemgbe ọtụtụ afọ, Baron etinyela aka n'ịghọ onye na - eweta ngwaahịa ụmụ aka na - eduga n'ụwa ma na - enye ndị mmekọ anyị uru pụrụ iche, si otú a na - eke ọnọdụ mmeri maka azụmahịa na ndị ahịa.
Nke gara aga: OEM / ODM orylọ ọrụ orylọ Ọrụ Ihi ụra Ihi ụra - Besuper Bamboo Planet Baby Diaper - Baron
Osote: Besuper achara Planet Baby metụ akwa
ahaziri diaper emeputa
Metụ akwa Factory
Metụ akwa Manufacturer
onye mebere metụ akwa
Eco metụ akwa
Eco sere-elu metụ akwa ọkpa
Lady Diaper Ogologo ọkpa
Nwanyị Sanitary Napkin
ODM metụ akwa
OEM metụ akwa
-uputa-elu uwe metụ akwa
Mezie metụ akwa, Super Absorbency Adult metụ akwa, High Quality Eco metụ akwa, Mechie nwa ọhụrụ, Baby Wipes N'ihi Mmetụta Skin, Metụ nwa,
Mezie metụ akwa, Baby Wipes N'ihi Mmetụta Skin, Mechie nwa ọhụrụ, High Quality Eco metụ akwa, Super Absorbency Adult metụ akwa, Metụ nwa,